Hevitra MPANOHARIANA | Mey 2010 |
Sary famoahana ny razana teny Andohalo
2010-05-24 @ 22:31 in Ankapobeny
Tsy dia hanao be resaka loatra fa mba mamoaka izay sary teny amin'ny famoaham-paty teny Andohalo tamin'ny alatsinan'ny pentekosta 24 mey 2010 fotsiny. Mirary fiononana ho an'ny fianakaviana. Ilazana fotsiny izay tsy mbola nahare fa misy fotoam-pivavahana ho an'ny tanindrazana eny amin'ny FJKM Amparibe Famonjena ny talata 25 mey 2010 ho avy izao manomboka ami'ny roa folakandro.
Nahavoriana olona ihany teny
efa eny amin'ny arabe moa izao fotoana izao
samy nifanety na ny olona na ny fiara
voaisanareo ve ny vona fito?
Maro tamin'ireo mpitandrina ireo no nibata azy
Itarafanao ny hamaroan'ny olona fotsiny
Ny trano biriky no niandrasana azy
Mba misy tia miakanjo miaramila koa izy izany
Tao anatin'ny vavaka
Tahaka ny fantatro ilay zalahy ity!
Fa naninona ny olona no ningonongonona rehefa ny mpitandrina Ramino Paul Abraham no nasaina nanao teny fampaherezana?
Mpanao politika maka sisiny ve?
Fa tsy misy sary miverina ve izy izany ry Jentilisa a?
Efa hoe i Fetison Rakoto Andrianirina io
Ny Pr Zafy Albert indray raha izao
Hanainga ireo fiara maromaro hamonjy fandevenana
Misy anaran-tshinoa izay ilay ao anaty fiara io sady mpanao politika koa izy
Misy ireo tsy afaka mandevina
Dia manotrona manaraka ny lalana
Nomena laharana ireo fiara hizotra any Ambohitrombihavana Handevina ny Pst Rivo. Noho ny asa aman-draharaha moa na dia andro tsy fiasana aza dia tsy afaka namonjy fandevenana ny tena.
Jentilisa, 25 mey 2010 amin'ny 01:00
Santiago toeram-pivoriana manaraka
2010-05-02 @ 15:11 in Ankapobeny
Raha miteny isika hoe Maputo, Addis Abeba, Pretoria dia manaraka ho azy ny Santiago (Tsy niady rima loatra ny toerana raha Johannesburg no nivoriana teo!). Tsy ny mouvances anefa no handeha amin'izany renivohitry ny Firenena Chiliana any Amerika atsimo izany fa ny olo-pirenena tia mitati-baovao anareo. Telo mianaka izahay ny malagasy ho any amin'izany toerana izany miainga avy eto an-tanindrazana fa misy koa ny Malagasy miainga avy any ampitan-dranomasina (Etazonia).
Hotontosaina ny 6 - 7 mey 2010 izany Vovonana karakarain'ny Global Voices izany ary tohizana avy hatrany amin'ny fivoriana anatin'ny mpitantana, mpanoratra, mpanitsy lahatsoratra ary mpandika lahatsoratra ho amin'ny fitenim-pirenena vitsivitsy an'i Global Voices ka anatin'izany ny teny malagasy. (Ny 8 - 9 mey 2010 no hanatontosana izany ao amin'ny Tranombokin'i Santiago).
Efa rentsika fa nisy horohorontany tany amin'io firenena iray io. Tsy nampihemotra na nanovana ny toeram-pivoriana iny toe-javatra iray iny fa lasa fijerena ihany koa aza ny fanorenana indray an'i Chili aza. Mazava loatra fa miompana amin'ny ho avin'ny Media Citoyen (fampitam-baovaon'olo-tsotra) sy ny fandraisany anjara mbamin'ny lanjany eo amin'ny sehatra iray ny resaka any. Manaraka izany, mifampitohy aminy dia efa hitantsika angamba ny fiovan-tavan'ny Global Voices amin'ny teny malagasy (Sy ny teny anglisy izay hadika teny koa mazava loatra) ... Endrika iray ho amin'ny fivoarana ihany koa ireny, ka irìna hiroborobo io sehatra teny malagasy io rehefa tonga avy any izahay sy rehefa maka aina vetivety kely monja.
Mazava loatra fa miserana kely ao Paris Charles de Gaulle ny tena ny tapakandron'ny alatsinainy 03 mey 2010 ( fa tsy mihevitra ny hivoaka ny seranana) sy ny tapakandron'ny talata 11 mey 2010 izahay. Asa raha tara loatra ny fanontaniako hoe mba manao ahoana moa ny fiantraikan'ny bolongana (mbamin'ny valantserasera isan-karazany) sy ny zavatra notantarainy taminareo, raha raisina ho ohatra ny zava-misy eto Madagasikara nandritra izay roa taona mahery izay. Raha toa tsy tafavoakanao eto ny hevitrao dia azonao atao ihany koa ny manoratra aty aminay amin'ny alalan'ny Imailaka izay azonao karohina ato.
Hiala kely ny rivotry Gasikara izany ny tena ka hody tsy hahalala ny zava-misy eto mandritra ny andro vitsivitsy fa ho mpanaraka tsotra ihany koa mandritra ny fotoana vitsy izay hanatrehana izany vovonana na fivoriana an-tampony izany.
Jentilisa, 02 mey 2010 17:13